Okwu Mmalite nke igwe ịghasa - Guangzhou Kainuo Machines Co., Ltd.
Homelọ » Okwu Mmalite nke igwe ịghasa
Na igwe ịghasa mejupụtara usoro inye nri na usoro eji akpọchi akpọchi. A na-akpọkwa nri udiri nri igwe. Igwe ihe nkedo a na-enye ihe nlere bu ihe di nfe umu skru a haziri ahazi n’usoro iji mee ka oru ha karie. A na-eji ngwa igwe eji eme ugbo ala na ebe ndi elere eletrik. Enwere ike itinye otu igwe na otutu kposara
Ogo nke ịghasa ahụ nwere oghere mmegharị ụfọdụ. O sitere na M1 ruo M8, na enwere oghere emere maka kposara pụrụ iche, Ekere iche.
1: 1 mkpụkọ mkpirisi, enwere ike iji kporo mkpuchi na gasks!
Ọ dị mfe idozi ụzọ! Enwere ike ịdọrọ egwu nke igwe ịghasa ma dozie ya n'enweghị ihe mgbochi! Ọ dị mfe nghọta, mfe iji rụọ ọrụ!
Teknụzụ igwe eji eme ihe ugbu a tozuru oke, ya mere na onu igwe akụrụngwa rapaara adapụtabeghị. Ọ bụrụ na enwere ihe ịtụnanya na-emegharị skru, Ha ga-akụ mkpu, ya mere ihe omimi nke oru n’enyeghi aka nke ndi oru n’ebelata.
A na-achịkwa akụrụngwa ịghasa dị ugbu a na sistemụ nri na draịvụ, enwere ike ịtọ oge nkwụsị zuru oke n’efu. Mgbe ọnọdụ adịghị njọ, igwe ịghasa ahụ ga-amalite ọrụ mmejọ mkpu! Operationrụ ọrụ ahụ dị mfe dịka igwe igwe ndị ọzọ!
Mgbe ị na-ewepụ ihe nkedo a, ọ bụrụhaala na etinye isi ihe nkedo ahụ na ntuziaka nke bit, slide ntuziaka, wee kpoo ihe ngere ahu ihu.
E jiri ya wee disk diski omenala, ịghasa nke ọ bụla nwere ike ịchekwa 1.4 sekọnd nke oge na arụpụta nwere ike iru 6 ugboro!
Ọ dị mfe iji rụọ ọrụ, ọbụlagodi novices nwere ike mụta otu esi arụ ọrụ
◎ Ọ dịghị mkpa mmezi kposara, tinye tinye kposara n'ime ụlọ nri
◎ A na-eji ya arụ ọrụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ elektrik, ugboala, televishọn, ntụ oyi na ụlọ ọrụ ndị ọzọ chọrọ skru.
Oge nzipu ozi: 2020-04-23
Copyright 2022 Ịghasa isi igwe ịghasa ihe eji eme onwe ya ihe eji eme ya..